नियमित शंख बजाउनुहोस्, हुन्छन् यस्ता चमत्कारिक फाइदा ! जानी राखौ «
नियमित शंख बजाउनुहोस्, हुन्छन् यस्ता चमत्कारिक फाइदा ! जानी राखौ
Published : 26 January, 2020 8:26 pm
घर वा मन्दिरमा पुजा गर्दा शंख बजाइने गरिन्छ । हिन्दु धर्म मान्नेहरुको धेरैजसो घरमा शंख राखिएको हुन्छ । हिन्दु धर्म मान्नेहरुको घरमा बिहानबिहान पुजा गर्दा शंख बजनएको सुनिन्छ । धेरैजसोले नियमित शंख बजाएर पुजा गर्ने गर्छ ।
शंख बजाउदा जति धार्मिक महत्व छ, त्यति नै वैज्ञानिक प्रभाव पनि छ । स्वास्थ्यको दृष्टीले पनि शंख बजाउदा धेरै नै फाइदा हुन्छ । शंख बजाउदा श्वास भर्दै छोड्दै गर्दा स्वास्थ्य ठिक हुन्छ । शंख बजाउने गरेमा कहिल्यै हृदयघात पनि हुँदैन ।
शंखको ध्वनीबाट वातावरणमा भएका जीवाणुहरु नष्ट हुन्छन् । शंख बजाउदा लामखुट्टे भाग्ने पनि वैज्ञानिकले आफ्नो प्रयोगबाट सावित गेका छन् । राती शंखमा पानी भरेर राख्नुहोस् र त्यहि पानीले बिहान छालामा लगाएमा छालासम्बन्धी रोग लाग्दैन । शंखमा राखिएको पानी पिएमा पेट सम्बन्धी समस्या पनि हुदैन । शंख बजाउदा दिमागमा भएका नकारात्मक विचारहरु हटेर जान्छन् ।